Redmi Buds3Pro သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်နားကြပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် Androidsis
နောက်တစ်ခါပြန်လာပါမယ် ကြိုးမဲ့နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ သို့သော်ယခုတစ်ကြိမ်တွင်မည်သည့်အရာနှင့်မျှရင်ဆိုင်ရမည်မဟုတ်ပါ၊ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mi-fans များမှအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ထားသည့်မော်ဒယ်တစ်ခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။ ကျနော်တို့ကအသစ်တွေကိုရက်အနည်းငယ်လောက်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ် Redmi ဘူးသီး3Pro ကို အကြှနျုပျတို့သညျသူတို့ကိုအကွောငျးပွောကွ၏။
Xiaomi ကိုကောင်းစွာသိပြီးသားသူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုရှိသည် အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအတွက်မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များ။ လက်မှတ်ကိရိယာတစ်ခုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းမရသေးသူများအတွက် Buds3Pro သည်ထိုအရာကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
1 Buds3Pro, သူတို့သည်အခြားပုံစံတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ
2 Redmi Buds3Pro ကို unboxing
3 ဘူးသီး3Pro ကိုဒီဇိုင်း
3.1 ဖြစ်ရပ်မှန်ဘူးသီး3Pro ကိုအားသွင်း
Buds3Pro, သူတို့သည်အခြားပုံစံတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ
သိတဲ့အတိုင်း Androidsis မှာနားကြပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ လူတိုင်းမှာကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်၊ သူတို့ကအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်အမြဲရှိတယ်။ အထင်ရှားဆုံး၊ အထူးခြားဆုံး၊ အရောင်စုံဆုံး၊ ဈေးအသက်သာဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ နှင့် Redmi ဘူးသီး3Pro ကိုသူ၏ သင်သည်သင်၏နောက်ဝယ်ယူမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအကြောင်းပြချက်များစွာကို.
ပထမ ဦး ဆုံးရယူပါ ဘူးသီး3Pro ကို လျှော့စျေးကူပွန်နှင့်အတူ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်နားကြပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုမြင်ရပုံရသည်။ ပြီးတော့အရောင် (သို့) ပုံသဏ္beyondာန်ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်။ Redmi Buds3Pro သည်ကျန်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုထူးခြားစွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည် ထူးခြားသောနည်းဖြင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တကယ်တော့၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားထင်ရှားသောပထမအချက်မှာ၊ ထွက်ကျန်ကြွင်းသောသောထိတွေ့နိုင်သောအစိတ်အပိုင်း နား၏။ တစ် ဦး အတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ဖန်ခွက်နှင့်တူသောတောက်ပ, စေးပလပ်စတစ် နှင့် device ကိုတစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် အလွန်ပရီမီယံကြည့်။ သူတို့ရှိခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများမှထွက်ပေါ်လာသည်မှာသံသယမရှိပါ ကျနော်တို့ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သူအပေါင်းတို့မှတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပုံရိပ်.
Redmi Buds3Pro ကို unboxing
ဤအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောနားကြပ်များ၏သေတ္တာထဲကိုကြည့်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းကိုတက်မသွားနိုင်ပါ Mi ၏ထုပ်ပိုး, ထုံးစံအတိုင်း ခြားနားချက်ကိုမှတ်သားပါ အရည်အချင်းနှင့်အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ။ အပြောင်းအလဲအတွက်ငါတို့ပြောတာကမင်းကိုနည်းနည်းလေးပဲ ငါတို့မျှော်လင့်နိုင်သမျှ။ နောက်ပြီးမင်းမစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ သင်၏ Buds3Pro ကိုယခုမှာယူပါ Aliexpress အပေါ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာ။
La အမှုအားသွင်း, ငါတို့ကိစ္စတွင်အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အလင်းမီးခိုးရောင်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းရှိပါတယ် နားကြပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည် အခြေခံအသုံးပြုမှုစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်ထုတ်ကုန်အာမခံ။ နောက်ဆုံး၊ cable ကိုအားသွင်းနေစဉ်, သောဤအချိန် format ကိုရှိပါတယ် USB အမျိုးအစား Cနှင့်သုံး pads ၏အပိုစုံ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၏။
ဘူးသီး3Pro ကိုဒီဇိုင်း
A priori, သူတို့ကိုမစမ်းသပ်ခင် Buds3Pro ရဲ့ဒီဇိုင်းကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှင့်အတူပြသမူရင်းအသွင်အပြင်၏ အလင်းနှင့်တောက်ပသော "ဖန်" ကိုအသုံးပြုခြင်း နားကြပ်များ၏ထိတွေ့ဇုန်သည်။ သေချာပါတယ် အောင်မြင်မှုတစ်ခု ဒါကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအဘယ်သူ၏ finish ကို သူတို့ကိုစျေးကွက်၏ဇာတ်ကောင်စေသည်။
အသစ် Buds3Pro ကိုတစ် ဦး ရှိသည် In-ear format“ နားအတွင်း”၊ သူတို့ကထိုကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များကိုနှိုးဆွသောကျော်ကြား pads ၏အသုံးပြုမှုပါစေ။ သူတို့မှာတကယ့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားရှိတယ်၊ တစ်ချိန်ကနေရာချလိုက်တာနဲ့သူတို့ကထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာကိုသာထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တယ်။ gummies နှင့်အသုံးပြုပါကအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်များစွာတိုးတက်လိမ့်မည် လုံလောက်သော ငါတို့ခန္ဓာဗေဒနဲ့လည်းအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေတယ် လုံခြုံကိုင်သေချာပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့မှာaနားကြပ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ၃၅ mAh အားသွင်းနိုင်သည် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိစေတယ် ပြန်ဖွင့်6နာရီ ဆက်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအသံအနိမ့်အမြင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆူညံသောအသံဖျက်သိမ်းခြင်းကိုပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေမပြုလုပ်သည်။ သင်နားကြပ်ထဲတွင်ရှာဖွေနေသမျှ သင်၏ Buds3Pro ကိုဝယ်ပါ လျှော့စျေးကူပွန်နှင့်အတူ။
ဖြစ်ရပ်မှန်ဘူးသီး3Pro ကိုအားသွင်း
သင်အားသွင်းသည့်အရာကိုကြည့်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုဖြင့်ပွတ်ထားသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အရွယ်အစားကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းအိတ်ဆောင်ထဲသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဘယ်နေရာမှာမဆို ၎င်းတွင်သံလိုက်အဖုံးရှိပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြည့်ဝစွာပိတ်နိုင်ပြီးဝန်သည်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ရှေ့တွင်ကျွန်တော်ရှာပါ ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်ခလုတ်ကို စမတ်ဖုန်းဖြင့်တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုရမည်။
charging case ရဲ့ရှည်လျားတဲ့ပုံသဏ္givenာန်ကိုကြည့်ပြီး headphone ကိုဒေါင်လိုက်နဲ့အပေါ်ဘက်ကနေဒေါင်လိုက်ဖြည့်ထားတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အကြိမ်ချင်းစီမည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ ဒါကငါတို့မကြာမီထိန်းချုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုအရာတစ်ခုခုဖြစ်သော်လည်း။
အောက်ခြေမှာငါတို့ရှာပါ port ကိုတင်, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည် USB Type-C အမျိုးအစား။ အဲဒါရှိတယ် 470 mAh အားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည် နောက် ၂ နာရီခွဲအတွင်းသင့်အား ၁၀၀% ငွေသွင်းနိုင်သည်။
Redmi Buds3Pro နားကြပ်အသစ်များရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသင်သည်လည်းတစုံတခုကိုမျှမလွတ်နိုင်ရာ။ ကျနော်တို့နည်းပညာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဘလူးတုသ် ၅.၀ ကမ်းလှမ်းသည် 10 မီတာအကွာအဝေးအထိစူပါတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှု။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် နားကြပ်များကိုစက်နှစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ မင်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင် အချို့သောဘူးသီး3Pro ကိုရ Aliexpress အပေါ်လျှော့။
ဒါဟာအစ၏နည်းပညာကိုမီးမောင်းထိုးပြ စမတ်ဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှု။ ငါတို့ရှာတယ် သုံးကွဲပြားခြားနားသော Modes သာ ရွေးချယ်ဖို့ရာမှ။ ဒါပေမယ့်နားကြပ်တွေကတော့ ဆူညံသံအဆင့်ကို detect နိုင်စွမ်း သင့်လျော်သော mode ကိုလျှောက်ထားရန်။ သူတို့ရသွားပီ ပတ်ဝန်းကျင်အသံ၏ 35 dB အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင် သုံးဆမိုက်ခရိုဖုန်း နှင့် ထူးခြားသော algorithm သည်နောက်ခံဆူညံသံများကိုအထူးသဖြင့်စစ်ထုတ်သည်.
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာဂိမ်းကစားသူများအတွက်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည် Buds3Pro တွင် "gaming" mode ရှိသည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် ကြာချိန်ကို ၆၉ မီလီစက္ကန့်အထိလျှော့ချပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်း၊ pc သို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုအသေးစိတ်မမှတ်မိပါ။ Y သူတို့ MIUI နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်တလျှောက်ရ Pop-up နှင့်အလျင်အမြန်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။ Buds3Pro ဖြင့်ဂီတကိုနားထောင်နိုင်သည် အားသွင်းစရာမလိုဘဲ ၂၈ နာရီအထိ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝဘက်ထရီအားသွင်းကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း6နာရီအထိမပြတ်မတောက် တေးဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးစီးရီး။
ပုံစံ ဘူးသီး3Pro ကို
အကွာအဝေး မီတာ ၂၀ အထိ
စမတ် ANC ရရှိနိုင်သုံးခု Modes သာ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး 28 horas
နားကြပ်ဘက်ထရီ 35 mAh ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီအိတ် 470 mAh ဘက်ထရီ
နားကြပ်အချိန်အားသွင်းသည် 1 အချိန်
အချိန်ကိစ္စအားသွင်းခြင်း 2.5 horas
အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း3မိနစ်နှင့်အတူအသုံးပြုမှု 10 နာရီ
တင်ပုံစံ USB အမျိုးအစား C
ကြိုးမဲ့အားသွင်း ဟုတ်ကဲ့ - Qi
နားကြပ်အလေးချိန် 4.9 ဂရမ်
ဖြစ်ရပ်မှန်အလေးချိန် 55 ဂရမ်
ဝယ်ယူ link ကို ဘူးသီး3Pro ကို
ဆက်သွယ်မှု ဘလူးတုသ် 5.2
ကြိုးမဲ့အားသွင်း သဟဇာတ Qi
နားကြပ်ပုံစံ နှင့် "gummies"
နား Format ၌တည်၏
Redmi ဘူးသီး3Pro ကို
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 19 က de Julio က de 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 19 က de Julio က de 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Redmi Buds3Pro၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထင်မြင်ချက်